DAAWO VIDEO: Shariif Sh. Axmed oo raali gelin ka bixiyay qeyb ka mid ah khudbaddii uu jeediyay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Shariif Sh. Axmed oo raali gelin ka bixiyay qeyb ka...
DAAWO VIDEO: Shariif Sh. Axmed oo raali gelin ka bixiyay qeyb ka mid ah khudbaddii uu jeediyay!
Muqdisho (Halqaran.com) – Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore ee Somaliya ayaa raaligelin ka bixiyay qayb ka mid ah khudbaddii uu jeediyay Isniintii, ee uu kaga jawaabayay tallaabadii ay dowladda uga joojisay safarkii uu Axadii ku taggi lahaa Magaalada Kismaayo.
Shariif Sheekh Axmed oo tirinaayay Maamul Goboleedyada ayuu halkii Koonfur Galbeed uu ka oran lahaa uu kaga hadaaqay Baay iyo Bakool, taasoo ay dadka qaarkii si khaldan u fasirteen.
Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in uu raaligelin ka bixinayo sida khaldan ee hadalkiisa loo fasirtay, waxaana uu iftiimiyay in Baay iyo Bakool uu ugala jeeday Maamulka Koonfur Galbeed.
Hoos ka daawo muuqaalka raali-gelinta Shariif Sheekh Axmed
Baay iyo Bakool
Khudbada uu jeediyay
Shariif Sheekh Axmed raali gelin koonfur galbeed